कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ०६ गते सोमबारको राशिफल ! -
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ०६ गते सोमबारको राशिफल !
वि.सं.२०७६ साल असोज ०६ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१९ सेप्टेम्बर २३ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । आश्विन कृष्णपक्ष । तिथि नवमी,१८ घडी ४५ पला,दिउसो ०१ बजेर २३ मिनेट उप्रान्त दशमी । नक्षत्र आद्र्रा,०४ घडी ३३ पला,बिहान ७ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त पुनर्वसु । योग वरियान,२४ घडी ५० पला,दिउसो ०३ बजेर ४८ मिनेट उप्रान्त परिध । करण गर,दिउसो ०१ बजेर २३ मिनेट उप्रान्त वणिज,रातको १२ बजेर २३ मिनेट उप्रान्त भद्रा । आनन्दादिमा काल योग । चन्द्रराशि मिथुन,रातको ०१ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ५२ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५८ मिनेट । दिनमान ३० घडी १४ पला ।
आज हरेक कदम सम्हालेर उठाउनुहोला । आसपासका स्वजनको साथ उग्र चर्चा नहोस् त्यसको विशेष ध्यान राख्नु होला । शारीरिक र मानसिक रुपले व्यग्रताको अनुभव गर्नु हुनेछ । अनिद्राको कारण स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । बौद्धिक चर्चाले आनन्द त प्राप्त हुन सक्दछ तर ति बाट टाढा रहनु होला । सम्भवत प्रवासलाई स्थगित गर्नु होला ।
भावनाको बन्धनमा बाँधिएको अनुभव हुनेछ । दिनमा कार्य सम्पन्न हुँदा आनन्दको मात्रामा वृद्धि हुनेछ । भाई-बहिनिबाट लाभ हुनेछ । शारीरिक र मानसिक रुपले प्रफुल्लितताको अनुभव गर्नु हुनेछ । आर्थिक लाभको योग छ । यद्यपी मध्याहन पश्चातको स्थिति विपरीत हुने सम्भावना छ । अधिक धन खर्च र अपयश प्राप्त हुने योग छ ।
नकारात्मक मानसिक व्यवहार नराख्नु होला । अशंतोषको भावनाले मन ग्रस्त रहनेछ । पारिवारिक वातावरणमा मेलजोल रहँदैन । शारीरिक रुपले पनि स्वस्थ रहनु हुँदैन । पढाई लेखाइमा विद्यार्थीको मन लाग्दैन । यद्यपी मध्याहन पश्चात मन प्रफुल्लित रहनेछ । आज कुनै पनि नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला । प्रतिस्पर्धी माथी विजय प्राप्त गर्नु हुनेछ । स्वजनको साथको भेटले मन आनन्दित रहनेछ । आनन्ददायी प्रवास हुनेछ ।
भावनाको प्रभावमा नआउनु होला । छोटो प्रवास या पर्यटनको सम्भावना छ । स्वास्थ्य राम्रो रहनुका साथै मन प्रफुलित रहनेछ । यद्यपी मध्याहन पश्चात मनमा निराषताको भावना आउँदा मन अस्वस्थ रहनेछ । अनैतिक प्रवित्तिले मन भ्रष्ट नहोस् यसको विशेष ध्यान राख्नु होला । अधिक धन खर्च हुनेछ ।
आज तपाइँ कुनै पनि निर्णय लिने स्थितिमा रहनु हुने छैन त्यसैले आवश्यक निर्णय आज नलिनु होला । पारिवारिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । वाणीमा संयम राख्नु होला ।
आज तपाइँको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ । अनुकूल परिस्थिति रहनेछ । शारीरिक र मानसिक रूपले सुख शान्ती रहनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि अनुकुल वातावरण रहनेछ । त्यसैले आज कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिनमा वाधा आउनेछ । मध्याहन पश्चात तपाइँको मनको स्थिति द्विधापूर्ण रहनेछ ।
पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहनेछ । परिवारको सदस्यको साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रहनेछ । घरको साज-सजावटमा परिवर्तन आउँदा मानसिक स्वस्थतामा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक आयोजन निष्ठापूर्वक संपन्न गर्न सक्नु हुनेछ ।
भाग्यवृद्धिको दिन रहेको छ । विदेश स्थित स्नेहीजनबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । धार्मिक प्रवासको सम्भावना छ । धन लाभको योग पनि रहेको छ । प्रत्येक कार्य सफल हुनेछन् ।
प्रातःकालको समय शारीरिक स्वास्थ्यमा केही खराबी आउनेछ । निषेधात्मक विचारले मनको स्वस्थतामा नकारात्मक असर पुर्याउने हुँदा वैचारिक स्तरमा संयम राख्नु आवश्यक छ । आकस्मिक धनप्राप्तिको योग छ ।
तपाइँको मनले वैचारिक धरातलमा मानसिक व्यग्रताको अनुभव गर्नेछ । अपेक्षाकृत अधिक संवेदशीलता र भावनाले मनमा आर्द्रताको अनुभव हुनेछ । आज कसैको साथ वादविवादमा नउत्रिनु होला । नयाँ कार्यको प्रारम्भमा निष्फलता मिल्नेछ । जिवनसाथीको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ ।
आजको दिन सुख-शांतिपूर्वक बित्नेछ । पारिवारिक जीवनमा पनि आनन्द छाउनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्राप्त हुनेछ । आनंद-प्रमोदको साथ वाहनसुख मिल्नेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा कृति प्राप्त हुनेछ । छोटो प्रवास या पर्यटनको सम्भावना छ ।
आज विजातीय आकर्षणबाट टाढा रहनु नै उचित हुनेछ । कुनै पनि व्यक्तिको साथ साथ बौद्धिक चर्चा या वाद-विवाद नगर्नु होला । नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु नै उचित हुनेछ । मध्याहन पश्चात स्थितिमा आकस्मिक सुधार आउनेछ । शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थताको अनुभव गर्नु हुनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र ५ गते शुक्रबारको रा’शिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र ३ गते बुधबारको रा’शिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन-३१ गते शनिबारको रा’शिफल !